Soomaali / Tusmada Xulashada Dugsiyada PreK-12 ee 2018-19
Tusmada Xulashada Dugsiyada PreK-12 ee 2018-19
Arji loogama baahna in ay buuxiyaan ardayda:
Sii wadanaya iskuulka ay hadda dhigtaan una gudbaya fasallada xiga
Deggan Saint Paul haddana dhigta Iskuullada Dadweynaha ee Saint Paul isla markaana galaya fasalada 6-aad ama 9-aad iyagoo raacaya qaabka iskuulkoodu u jideeyay
Fadlan Ogow: Ardayda galaysa fasallada 6 ama 9 ee aan ku noolayn xadka Magaalada Saint Paul waxaa laga rabaa inay buuxsadaan arji.
Ardayda hadds dhigata iskuullada ee danaynaya inay doortaan barnaamij waxbarasho oo ka baxsan kan xaafadda, gobolka ama degmada waxay u baahanyihiin inay soo gudbistaan codsi/arji. Arday wuxuu iska diwaan galin karaa fasallada ka dib marka loo qorsheeyo.
Soonaha Dugsiga Xaafada
Ahmiyadani waxay khusaysaa ardayda dugsiyada hoose oo dhan. Waxaa ahmiyada la siinayaa ardayda degan soonaha dugsiyada xaafada si ardayda degan xaafada dugsiga u galaan.
Muujinaya Saint Paul
Ahmiyada aqbalaadani waxay ku salaysantahay deganaansha aha cinwaan ku yaala xaafad ay baahi badani ka jirto, taas oo lagu qeexay saamiga deganaadayaasha mudan in la siiyo qado lacag la’aan ah ama qiimo jaban; saamiga degaanadayaasha luuqadooda gurigu ahayn Ingiriis; iyo inta aqoonta akhriska iyo xisaabtu la’egtahay ardayda xaafadaas degan.
Kadib marka ardayda loo ogolaado dugsiga soonaha xaafada, dugsiyada ku yaala xaafadaha faqrigoodu hooseeyo waxaa boqolkiiba 25 kuraasta la heli karo loo gaar yeelayaa ardayda degan xaafadahaas.
Liistada dugsiyadaas ee fqrigoodu hooseeyo waxaa ka mid ah: Capitol Hill Gifted and Talented, Chelsea Heights Elementary, Expo Elementary, Groveland Park Elementary, Highland Park Elementary, Horace Mann School, Jie Ming Mandarin Immersion Academy, J.J. Hill Montessori, L’Etoile du Nord French Immersion (Lower and Upper Campus), Nokomis Montessori (South Campus), Randolph Heights Elementary, and St. Anthony Park Elementary. Akhbaar dheeraada ah wac Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760.
Ahmiyada waxaa la siindoonaa ardayda ku nool xuduudka aagga la aqoonsaday (A-F1/F2), balse ka baxsan soonaha dugsiga xaafada.
Waxaa ahmiyada la siindoonaa ardayda codsanysa in ay galaan dugsi cinwaankooda dugsi-goboleed Magnet u ah.
Waxaa ahmiyada la siindoonaa ardayda codsanysa in ay galaan dugsi-degmo oo Magnet-ah, ardaydaas oo ku nool xuduuda ay ka koobantahay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul.
Ka baxsan degmada
Ardayda ku nool meel ka baxsan Magaalada Saint Paul waa loo ogolaan karaa in ay galaan dugsiyada degmada haddii boos banaan loo helo.
Tix-galin siin Shaqaale Gaar ah
Ahmiyada waxaa la siindoonaa ilmaha ay dhaleen shaqaale ku jira ururada shaqaalaha ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Ahmiyadan uma ogolaanayso ardayda codsanaysa in ay galaan dugsiga Capital Hill iyo barnaamijyada xanaanada ka hor.
Caruurta ay walaalahood hadda dhigtaan dugsiga la codsaday waxay helayaan ahmiyadaha ogolaansha ah oo dhan, haddii aan si gaar ah wax diidaya loo sheegin. Si aad xaq ugu yeelato ahmiyada walaalnimada loo ogolyahay waxaa khasab ah in uu ilmo kuu dhigto dugsiga aad la codsaday sanad dugsiyeedka 2017-18 markaasna uu sii dhigan doono sanad dugsiyeedka 2018-19.
Arrin muhiim ah ka hor intaadan codsanin dugsiga
Xaqiiji in la heli karo gaadiid kaa soo qaada gurigaaga oo ku keena dugsigaad dooratay.
Fiiro gaara u yeelo siday u socdaan barnaamijyada dugsiyada loo yaqaano magnet-ka loga bilaabo dugsiyada hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sareba.
Barnaamijyada waxbarasho ee dugsiga ka hor iyo ka dib waa laga heli karaa aaggaga oo idil, laakiin ma aha dugsiyada oo dhan. Dooro dugsiga leh adeega aad u baahantahay.
Haddii aad codsato dugsi ka baxsan aaggaaga ama dugsiyada xaafadaada, waxaad u baahantahay in aad saxiixdo warqad cadaynaysa in aadan gaadiid xaq u lahayn ood adigu ilmahaaga dugsiga gaynaysid ood ka soo qaadanaysid.